Barnaamijka Affiliate ee dukaanka online ee hormoonka koritaanka ee Thailand
Sidee ugu biiri kartaa barnaamijkayaga midnimada?
- Marka hore waxaad u baahan tahay nala soo xiriir Iyo inaad hesho xisaab lamaane ah
Sida ay u hawlgasho?
- Kadib diiwaangelinta, waxaad heli doontaa lambar khaas ah macaamiishaada. Ka dib iibka kasta, waxaad ka heshaa guddigaada macaamil macmiilka
Maxaan ugu baahanahay inaan ku biiro barnaamijka lammaanaha?
- Lacagta dhabta ah nala wadaag!
- Ka hel qiimo gaar ah ee la-hawlgalayaasha alaabtayada
- Hel helitaanka alaabta la iibsado
- Wali miyaad u maleyneysaa? Hadda ku soo biir!